What is 10 million to me, Grace asks? | The Insider
First Lady Grace Mugabe yesterday said she turned down a $10 million bribe to persuade her husband President Robert Mugabe to abandon the land reform programme, according to The Herald. But it was not clear whether this was 10 million Zimbabwe dollars or 10 million United States dollars. Zimbabwe currently uses United States dollars but it was using its own local currency when the land reform started. “Munoziva zvatiri pano takaenda through zvakawanda zvatakaona. Baba kwaiuya vanhu vachioffer kuti toda kukuvakirai imba. Pane vakauya tikati let us look at the plan zvikanzi thank you very much kana une mari endesa kuZANU-PF. Handifunge kuti yakaenda kuZANU-PF, vaida kutenga Baba, kutitenga. Vamwe vaona kuti zvaramba kunaBaba and thought kuti mukadzi waBaba zvaari wechidiki anotengeka. I cannot be bought also, handitengwe nemari nekuti zvandinopihwa zvakahwanda imimi mukasazviona mukomana arikudenga anozviona. Pane vakauya kwandiri vakati Amai heyo 10 million varungu zvese zveminda dai zvapera ndikati ‘stupid do not ever come here again, do not ever call my office again! Ndikati you are insulting me, what is 10 million kwandiri? Unofunga kuti ndinotadza kushandira 10 million ini? What about Zimbabwe yese? Tanga wapa mumwe nemumwe 10 million, Ndakamutuka, I almost spat on his face. Ndikati handidi kunzwa nezvako, don’t ever come here nekuti iwe unoda ndiudze baba kuti tiite huori, corruption pachirungu,” she said.